‘गुम्बाका मूर्ति बुलेटप्रुफ बाकसमा’ - संवाद - नेपाल
नेपालको सबैभन्दा अग्लो मानव बस्ती हो, धो तराप । यो क्षेत्र कर्णाली प्रदेशको उपल्लो डोल्पाको ३ हजार ९ सय मिटरदेखि ४ हजार ३ सय मिटर उचाइमा फैलिएको छ । यही सुन्दर हिमाली उपत्यकामा २४ देखि २८ भदौमा डोल्पो महोत्सव हुँदै छ । महोत्सवको चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन्, संयोजक ग्याल्पो थापा भोटेले ।
यो ठाउँमा के त्यस्तो चीज छ, जसले मानिसलाई तान्छ ?
डोल्पो क्षेत्र सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदामा एकदमै धनी छ । १ हजार २ सय वर्ष पुराना गुम्बा छन् । भाषा, भेष, रहनसहन बाहिरी दुनियाँभन्दा फरक छ । यो ऐतिहासिक महफ्वको थलो पनि हो । नेपाल एकीकरण हुनुअघि यो प्रशासनिक केन्द्र थियो । १४ औँ शताब्दीमा त यो छुट्टै राज्य थियो ।
कस्तो संस्कृति हो, नहेरी नहुने ?
हिमाली/तिब्बती भेषको असली संस्कृतिको स्वरुप यहाँ मात्र देख्न पाइन्छ । अन्यत्र पनि हिमाली संस्कृति छ । तर ती सबै ठाउँमा आधुनिक संस्कृतिको मिश्रण छ ।
अन्यत्र मिश्रण हुने, यहाँ नहुने कसरी ?
भौगोलिक रुपमा एकदमै विकटमा पर्छ यो क्षेत्र । अझै पनि सडक मार्गले छोएको छैन । सदरमुकामदेखि तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण यहाँका बासिन्दाको बाहिरतिर उति सम्पर्क भएन । त्यसैले यहाँ परम्परागत स्वरुपमै हिमाली संस्कृति जोगियो ।
हिमाली संस्कृति दुरुस्त जोगाउन सकिएला ?
सूचना, प्रविधि र भौतिक विकाससँगै उपल्लो डोल्पा बिस्तारै आधुनिक संस्कृतिसँग नजिक हुनेछ । त्यही भएर हामीले यहाँको संस्कृति जोगाउन छुट्टै अभियान चलाएका छौँ । स्कुलमा डोल्पो भाषामा पढाइ हुन्छ । हाम्रो भाषामा पाठ्यक्रम बनिसकेको छ । विद्यालय पोसाक पनि हाम्रो आफ्नै छ ।
बाहिरी संसारसँग जोडिनकै लागि महोत्सव हुन लागेको हो ?
हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमा पछाडि छौँ । नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न ध्यान नदिएकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई झकझकाउन महोत्सवको सोच ल्याएका हौँ । गुणस्तरीय पर्यटक आएपछि यहाँको आम्दानी बढ्छ र त्यसले सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
उपल्लो डोल्पोको समाजलाई कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हिंसारहित र शान्तिप्रेमी । पाहुनासँग गाँसबासको पैसा लिँदैन । अरुलाई सत्कार गर्दा आनन्दित हुन्छ ।
हिंसारहित समाजका गुम्बाबाट ऐतिहासिक मूर्ति र धनमाल चोरी भएछन् नि ?
५० वर्षअघिदेखि यहाँका गुम्बाका मूर्ति हराउन थालेको हुन् । १० वर्षअघिदेखि यस्ता घटना अलि बढी भए । एकाध फटाहा त जहाँ पनि भइहाल्छन् । त्यस्ता केही बदमास मानिसको संलग्नतामा बाहिरकाले मूर्ति चोरी गरेका हुन् ।
कति गुम्बाबाट चोरी भएका छन् ?
धेरैमा भएको छ । चोरी बढ्न थालेपछि हामीले पुरातफ्व विभागमा सम्पर्क गर्‍यौँ तर विभागले प्रभावकारी पहल गरेन । अनि, हामी आफैँले बुलेटप्रुफ बाकसभित्र मूर्ति राखेर जोगाउन थालेका छौँ । अहिले दुइटा गुम्बाका मूर्ति राखिसकेका छौँ । महफ्वपूर्ण सबै मूर्ति यसरी नै जोगाउँछौँ । यहाँ सरकारको सुरक्षा नै छैन ।
प्रहरी प्रशासन छैन ?
कहाँ हुनु ! असारदेखि असोजसम्म स्थानीयले खानेबस्ने बन्दोबस्त मिलाएर चार वर्षयता अस्थायी रुपमा तीनचार ठाउँमा प्रहरी राख्ने गरेका छौँ ।
ट्याग: ९ प्रश्न